गुर्जो कसरी सेवन गर्ने ? जाने अमृत नजाने विष ! - NepalTrending
काठमाडाैैं : गुर्जो नेपालमा पाइने महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो। गुर्जोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुने भएकोले आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुले यो जडीबुटीको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। औषधिय गुणले भरिपूर्ण यो लहरा नेपाली ग्रामीण भेगमा ज्वरो, रुघोखोकी र चिसोमा लाग्ने बाथलगायत अन्य रोगहरुको औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। साथै विभिन्न खालको एलर्जी, चर्मरोग, पेट रोगमा यसलाई रामवाण मानिन्छ। मधुमेह, क्या,न्सरसम्मका लागि गुर्जो अचूक ‌‌औषधि रहेको आयुर्वेद चिकित्सहरुको दाबी रहेको छ।
सेतो गिलोय सत‌:– बेलुकी पिसेर पानि मिलाएर राख्दा विहान भाँडोको पिंधमा सेतो मिश्रीको धुलो जस्तो सेतो गिलोय सत‌ जमेको हुन्छ । त्यस सतलाई मात्र खाए पनि हुन्छ । चपाउने:- टुक्रा बनाएर सुपारी जस्तै चपाउँदै खान पनि सकिन्छ । सुकेको गुर्जोको धुलो ४ देखि १० ग्राम १ चम्चा मह वा मिश्री तातो पानीमा मिलाएर विहान बेलुका सेवन गर्ने । ताजा गुर्जोको सेवनले कम्तीमा ३-४ महिना भित्र शरीरमा अद्‌भुत परिवर्तन ल्यउँदछ । हप्तामा १—२ पटक मात्र गुर्जोको जु्स पिउन सकेमा पनि धेरै लाभ मिल्दछ ।